Fandraisana an-dalampandrosoana ho an'ny Botnets Understanding - Semalt Expert
Ny botnet dia midika hoe tamba-jotra robot. Azo faritana ho tambazotra amin'ny ordinatera izay tratran'ny aretina antsoina hoe Malware na eo ambany fifehezan'ny bot-herder. Ny solosaina rehetra izay tarihin'ny bot-herder dia antsoina hoe bot. Ilay mpanafika dia afaka mandefa baiko amin'ny botneto amin'ny ordinatera mba hanatanterahana ny asa ratsy.
Michael Brown, Semalt Mpitantana Success Manager, dia manazava fa afaka manatanteraka ny asan-jiolahy ny mpanafika, miankina amin'ny sokajy na ny haben'ny botsaka izay nanafika ny tambajotra. Ny botsa dia afaka manao asa mampidi-doza kokoa izay tsy azo tratrarina amin'ny malware. Rehefa miditra amin'ny tambazotran'ny ordinatera ny botnets dia afaka mijanona ao amin'ny rafitra izy ireo ary hifehezan'ny mpanafika lavitra. Amin'izany fomba izany, ny solosaina finday dia afaka mahazo fanavaozana izay mahatonga azy ireo hanova ny fitondrantenany haingana.
Ny sasany amin'ireo hetsika ataon'ireo botnets dia ahitana:
Ny ankamaroan'ny olona dia tsy miraharaha an'io lafiny io satria mahatsapa ho toy ny mailaka efa lasa foto-dresaka fanafihana taloha. Na dia izany aza, botmets spam dia be dia be ary mety hanafika na aiza na aiza. Izy ireo dia ampiasaina indrindra handefa solosaina na hafatra diso izay ahitana malware izay tonga amin'ny isa marobe avy amin'ny botnet rehetra..Ohatra, ny Botnet Cutwail dia afaka mandefa hafatra 74 lavitrisa ao anatin'ny andro iray. Izany dia mamela ny fiparitahan'ny bôtô izay mihatra amin'ny ordinatera isan'andro sy mihoatra.
Ny fanafihan'ny DDoS
Manome ny haben'ny botnet izy io mba hanamafisana ny tambajotra manana fikolokoloana be loatra ka mahatonga azy ireo tsy ho azo ampiasaina amin'ny mpampiasa azy. Ny olona iray dia mila mandoa vola amin'ny fidirana amin'ny solosaina, ary izany dia mitranga amin'ny orinasa na noho ny antony samirery na ara-politika ka mandà azy ireo mba hahazo fampahalalana tena manan-danja, ary hifarana amin'ny fandoavana ny fanafihana.
Ireo botnets dia natao mba hangalarana vola amin'ny karatra karta sy orinasa. Izany dia tratran'ny fangalarana fampahalalana momba ny carte de crédit secretaire. Anisan'izany ny ZeuS botnet izay nampiasaina mba hangalarana vola an-tapitrisany amin'ny orinasa maro.
Ireo botnets dia somary bitika ary natao hanampiana ireo mpanafika hiditra ao amin'ny fikambanana ary hahazo fampahalalana miafina avy amin'izy ireo. Ireo hetsika ireo dia mampidi-doza ho an'ireo andrim-panjakana raha mikendry ireo angona miafina sy sarobidy indrindra izy ireo, anisan'izany ny fikarohana, ny fampahalalam-bola, ny mombamomba ny mpanjifa sy ny fananana ara-tsaina.
Ireo mpanafika ireo dia natao rehefa manitsy ny bots ny mpiandry bot mba hifehy ny servisy amin'ny fampiasana mailaka, fizarana rakitra, ary fitsipika fampihetseham-baovaon'olo-tsotra hafa na mampiasa bots hafa mba hiasa. Rehefa manokatra ny rakitra mahatsikaiky ny mpampiasa solosaina, dia mandefa ny tatitra amin'ny baiko izay mamela ny bot-herder mba handraisana sy hanamboatra ny ordinatera.
Nanjary fandrahonan'ny serasera ny Botnets raha oharina amin'ny viriosy hafa, ary misy vokany lalina eo amin'ny governemanta sy ny orinasa ary ny tsirairay izany. Botnets dia afaka mifehy ny tamba-jotra ary mahazo tombony, ary mety hitarika fatiantoka goavana izy ireo rehefa manao hackers amin'ny aterineto izay afaka manatanteraka hetsika mahatsiravina ka manimba ny fikambanana Source .